QABSOON OROMOO “ MAARSHII ” GEEDDARUU QABAA ! kutaa 2ffaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQABSOON OROMOO “ MAARSHII ” GEEDDARUU QABAA ! kutaa 2ffaa
QABSOON OROMOO “ MAARSHII ” GEEDDARUU QABAA ! kutaa 2ffaa
QABSOON OROMOO “ MAARSHII ” GEEDDARUU QABAA !
SEENAA Y.G (2005) kutaa 2ffaa fi xumuraa
Dhiigni Ilmaan Oromoo dhangala’ee akka hin hafnee, waa lamaanin abdii godhe. 1. Sochii Qabsaa’ootaa, Dhaloota har’aa fi Ummataa Biyya keessaa qindeeffamee adeemaa jiruu, 2. Gidduu kana Dubbi namicha AMEERIKAA HERMAAN KOYIN ibsa kennee booda. Namni kun wayyaanee Angootti fiduuf, shira qabsoo Oromoo irratti hojjatee seenaaf dhiifnaa. Isa boodas Dhiiga waggaa 26 guutu dhangala’aa jiru osoo arguu callisuu isaatiif , barumaaf keenya. Amma garuu osoo hin jaalannee dubbachuuf dirqameera. Isayyuu haasaa Doppilomaasii keessaa ba’ee , waanuma jiru lafa kaa’ee. Haasaa fi yeroo isaarraa xiinxaluuf hin jirru. Garuu kana dubbachuuf kan isa dirqisiisee , sadarkaa qabsoo keenyaa ittin madaaluu dandeenya. Dhiiga Ilmaan cunqurfamoo addatti, Ilmaan Oromootu isa futtaafachiisee. Ilkaan Diddiga hin dhorguu jedhama . Qabsoon keenya sadarkaa yaaddeessaa fi warra shira raawwataniif dhiphuu, warra seenaa dhokisanii seenaa dharaa jiraachisaniif , dirqama liqimsanii fudhachuurra geessee jirti jechuu dandeenya.
Nuuti ammallee Humnaa fi Qabeenyaa , akkasumas, dandeetti qabnuu qindeeffannee hin kaanee. humni sochoosaa fi tarkaanfileen fudhatamaa jiran, ofii keenyaa miinee isa kaan akka hin dallansiifnee ofirratti murteessaati. Miidhaa fi dhira nurratti raawwatamuun rifannus, inni kaan akka hin rifanneef ilaallachaa tarkaanfachaa jirra. Sochii keenya kana qofaatu , Mootii addunyaa dubbachiisuu eegalee jira. Kanarra tarkaanfii tokko MAARSHII geeddarraan, Seenaa xuraa’aa Gaanfa Afriikaa jijjiiruuf yaboo isaa fudhanna. Yeroo kanatti rakkoo baroota dheeraa keessa dabarre odeessaa goomachuu osoo hin taanee, Wareegama kafalaa jirrutti firii godhachuuf gama hundaan, Obsaa fi Murannoon keessa ba’uu qabnaa. Wareegamni amma baasaa jirru, dhaloota wareegamuu obbolaa isaa tarkaanfatee wareegama biraa baasuun barbaachisaa ta’uutti amanun waan ta’eef, hamilee isaanii eeguuf dirqamaan waan goonfannee jabaannee tikifachuu qabnaa. Sodaan NAMICHA AMEERIKAA HERMAAN KOYIIN mudachuu fi dhiisuun wayyaanee harka jira. Nuuti badii geesisuuf ykn Biyya seerri keessa hin jirre uumuuf deemaa hin jirru. Seera kan qajeelachuu isa seera irraa jal’atee seeratti deebisuu qofaan taati . kanaaf wayyaaneetu sodaa namichaa gama lamaanuu dhogomsaa hubadhaa. Nuuti ka seera dabsee karaa irraa kaasuuf deemna. Kan seera dabsee karaa irraa ka’uu didee jennaan , dirqamaan karaa irraa kaasuun murteedhaa. Kun biyya seera dhabdee nama taasisa taanaan boolla haa seentuu. Seerrii ka cabee gaafa seera abbaa biyyaa cabsanii waan ta’eef.
WAL GA’IILEE WAYYAANEERRAA MAAL HUBANNA ?
Wal ga’iilee wayyaanee fi wal ga’iilee OPDO FI BI’ADEEN irraa foolii Ummatootaaf hin tolleetu urgaa’aa jira. wayyaaneen qaawwaa Angoo irra jiraachuu tarkaanfachiisaa jirtuutu jira. Innis ifatti yoo keenyee, Mirgoota Oromoo fi Amaarri gaafatan amma tokko deebifatan jechuuf, Angoo Biyyatti gara caalaa isaaniif kennanii , akkasumas, dhaabbilee mormitootaa jedhaman amma tokko paarlaamaatti fidanii, Dinagdee fi humna waraanaan Biyyatti tu’achuuf akka deeman mul’isa. Sochiin amma itti jiran hundisaa waan Filannoo boodaa itti fufisiisuuf ta’uu gonkumaa hin dagatiinaa. Wayyaaneen ammatti waan hojjachaa jirtu hin jiru. Filannoo itti aanuuf qophii taasiisaa jirtii. Yoo waa humni humnaa ol ta’ee dhaabbilee mormitootaan mari’achuun dirqama itti ta’ee illee, dhaabbilee siyaasaa KAN akka ABO faa’aa asi deebisuu hin barbaadduu. Ammallee mirga sharafamee kennanii jiraachuu barbaadu. OPDO tti Angoo barbaadan itti kenninaan Qabeenyaa isaanii seeraan alaa jiraachiisuuf ykn beekumtii kennuuf. ABOn ammo waa hundaa ka isaan dhabsiisuu taasisanii irratti hojjachaa jiru qalbifadhaa. Shirri isaanii kun hundii isaan haa baasuu haa dhiisuu isaan itti haa cinqaman. Oromoon ka irratti xiyyffatuu qabu, wayyaanee hiddaan buqqisuu qofaa akka ta’eedhaa. Waan jiru hundaa caalaatti finiinsinee, wayyaaneen filannoo akka hin qabaannee taasisuu qabnaa. gonkumaa carraa mirga bubutuun argamturraa of eeggadhaa. Kanaan gonkumaa addaan qoodamuu hin qabnuu. Hanga dhumaatti qabsoo finiinsuutti haa fuulleeffannu. Wayyaaneen maqaa araaraa fi waluumaan jiraannaan, ammallee carraa Filannoo 2020 booda jiraachuu barbaaddii. Dhaabbilee mormitootaa 20 ta’an Biyya keessaa waliin qindaa’anii , Paarlaamaas akka qooddatan taasiisanii adeemsa waggaa 50 itti fufu barbaadu. Gonkumaa shiroota kana hin hayyamnuu. Carraa tokkollee laachuufii hin qabnuu. Araara yoo ta’ee Araara IHAADEEGOOTA gidduu gonkumaa hayyamuu hin qabnuu . Dhaabbilee Ihaadeeg gonkumaa hamilee Ummatoota walitti araarsuu fi waliin jiraachiisuu hin danda’an. Kaayyoon keenya tokkichi Oromoon ABBAA BIYYAA TA’UUDHA. KUNIS KAN DHUGAAN BAKKA ISA BU’UU BAKKA JIRUTTI MURTEEFFATA.
RAAYYAA WARAANAA OROMIYAA KEESSAA HARKISUU ILAALCHISEE :
Raayyaan waraanaa Oromiyaa keessaa harkifachuun wayyaanee dirqama. Ummata Oromoo raayyaa waraanaa ishee dhiisiitii eenyullee dura dhaabbachuu hin danda’uu. Har’a nama fixuu danda’uu. Bor garuu isaantu dhuma. Kana bareechanii beeku. Biyya Fedaraalizimii keessatti waraana amma tokko Ummata irraa ijaaramee Ummata irratti bobbaasuun laafaa miti. Takkaa dogoggorsitee duulchisee dandeessa. Yeroo lammaffaatti garuu isumatu sitti duula. Waraannii wayyaanee Aga’aziin ummata rukuchuu danda’aa. Waraanni kaan garuu hin danda’uu. Rakkoon karaa somaaliyaa, Calanqoo fi Booranatti eegalan maal irraa ga’aa akka jiru sirriitti argaa jiru. Adeemsi qabsoo Oromoo ammoo waraanaan ka dhaabduu miti. Kanaaf wayyaaneen ammatti waraana harkisuun dirqama. Waraanni nu fixuu danda’aa. Gumaan Ummata Oromoo garuu Tigiroota irratti akka ta’uu tolchanii beeku. Kanaaf waraana nu seenee gonkumaa sodaachuu fi arraa fagaachuurra itti hiiqanii carraa argataniin waa hubachiisuudhaa. Kan isaanii yeroo qaba. Kan wayyaanee garuu yeroon dhumateera. Kanaaf qaama laafaa filachuuf dirqamnaa. Waraana dhiibuu irra Tigirootatu nuuf salphata jechuudhaa. Kanarratti waan fedhee ta’uu gawwamsaa kana boodaa Tigirootaa, raayyaa waraanaa, gurra ergisuu dhiifnee, qabsoo keenya itti finiinsuu qabnaa. Raayyaan waraanaa nuuti isiniif ijaaramnee jechuu eegalan boruu waan biraa itti fufu maluu. Garuu waan gaafachuu fi barbaannurraa gonkumaa laafachuu hin qabnuu. Raayyaan waraanaa nurraa sokkinaan dansaa. OPDO UMMATA galaafachaa jiru adabuu fi bakka jiran qulqulleeffachuun itti fufu qaba. Raayyaa waraanaa qofaa osoo hin taanee, humni polisii fi humni Tikaa wayyaaneen hogganamuu Oromiyaa keessaa ba’uu qabaa. Kana jabeessinee MAARSHII itti geeddaruu qabanaa.
FINFINNEE KEESSATTI MAARSHII GEEDDARUU :
Siyaasa keenyaaf furtuun FINFINNEE dha. Maal jechuu kooti beektuu ? Wayyaaneen waggoota dheeraaf waan irratti hojjachaa jirantu jira. Humnaan ka nu buusuu haa dhufu ! jechuun isaanii, ega humnaan bu’an boodallee qophii akka taasisa ykn maal akka godhan beekuu jechuudhaa. Wayyaanoon gaafa humni Ummataa isaan fudhatee godaanurra ga’uu, akkuma Ingilizoonni Afriikaa Kibbaa godhan, dhiifama gaafatanii Qabeenyaa isaanii hanbifachuuf badadu. Qabeenyaa isaanii kana garuu bakka maratti hin facaafnee hubadhaa. Akkaataa omisha isaanillee Tigiraayii fi karaa jibuutii Biyya alaatti dhiheeffatan qopheeffataniiru. Malaalaaleen isaan Maadheeffatan, jireenya waliin, Finfinnee, Hawaasaa, Baahir Daar, Dirree Dawaa,amma tokko Adaamaa dha. Kontirobaandiif ammo, Ogaadeen, Dirree dhawaa, Moyaalee, Affarii fi JIbuutiidhaa. Kana hundaaf karaa fi baabuura barbaachisu hundaa qindeeffataniiru. Finfinnee keessaa ammo, magaaloota haaraa kan mataa isaanii maqaa mana kondiniyeemiin ijaaraniiru. Kanaaf wayyaaneen Oromiyaa irra jireessa OPDO fi humna tigiroota muraasaan jirtii jechuudhaa. Egaa wanni wayyaanee rifaasisuu fi lubbuu itti mi’eessuu dhimma Finfinneeti. Finfinnee keessatti waan fedhee haa ta’uu MAARSHII JABAA geeddaruu qabnaa. Finfinneen dirqamaan abbaa akka qabuu beeksiisuu qabnaa. Mandhee isaanii kana kan dugda itti gatatan taasisiuu hin qabnuu. Filmaata kana dhorlachu qabnaa.ganda isaanii akka dansaatti adda baasanii irratti hojjachuu barbaachisa. Kubbaaniyoonni isaanii Finfinnee marsanii jiran, humna ibsaa madda lama sadii irraa akka argatanitti hojjatamanii jiru. Ammallee nagaa dhabuu qaban. FINFINNEE tti sochii dhugaa itti argisiisuu qabnaa. Gurraa addunyaattillee dhihoo jirra. MAARSHIIN KUN QABSOO KEENYAAF FURTUUDHAA !! BAKKA ILMAAN KEENYATTI MURTEE DABARSAN, GAAZEXESSITOOTA WAREEGAMTOOTA KEENYA IRRATTI BAACAN JIRAATAN, MADDA WAA HUNDAATI. HAWAANNISA WALIIN FIIGAA OOLURRA, MADDA HAWAANNISAA GOGISUUTU FURMAATA.
MOOTUMMAA KUFFISUUF QABXII INNI GUDDAAN MAALII ?
Namoonni yeroo hedduu miidhaa fi ajjeechaa irra ga’urraa ka’anii murtee dhumaarra ga’uu.jireenya hawaasummaa keessatti , waan itti aaran tokko yerooma sanatti murtee irratti fudhachuun ni jira. Murteen sun garuu sirri ta’uu fi dhiisuu mala. Jireenya hawaasummaa keessatti waa hedduu irratti ammuma murteessuu fi tarkaanfii fudhachuu ykn deebii laachuu dandeenya. Siyaasa keessatti garuu akkasii miti. Siyaasa keessatti aarii fi dantaa nama tokko ykn garee tokko osoo hin taanee, kan Ummataatu ilaalama. Waa hundaa bu’aa fi miidhaa isaatu ilaalama. Qabsii kana gadi fageenyaan yeroo biraa itti deebina.
Ammatti Mootummaa tokko qaama guutuun osoo jiruu kuffisuun ulfaataadhaa. Adeemsa mataa isaa qaba. Qabsoon oromoo gama kanaan waa hedduu keessa dabree asi ga’ee jira. Gara keessaattis ta’uu alatti waa hedduun hojjatamee asi geenyee jirra. Kanaaf ammallee miidhamnii osoo nurratti hedduumaattuuu waan ciniinnannee qabnee tarkaanfannutu jira. Waan wal eeguu qabu hedduutu jira. Mootummaa wayyaanee keessa isaa nyaatanii fixuun haalaan barbaachisaadhaa. Keessi wayyaanee haalaan burkutaa’eera. Hunda caalaa siyaasi isaanii dhumachuu qabu. Adeemsa wayyaanee waggaa 25 dura himamee ture. Ummati garuu irratti walii galee tokkummaan kan dura dhaabbachaa jiru waggaa 26 booda . kanaaf haala jiru hundaa amananii fudhatanii ammallee keessaa fi alatti hojjacha adeemuutu barbaachisa. Yeroo hundaa waan wareegama keenya hanqisuu filachuun barbaachisaadhaa. Wayyaaneen walillee galaafannee, qabeenyaan keenyallee barbadaa’ee akka duubatti deebinuu barbaaddii. Sun hundi bishaan dhugera. Adeemsa amma itti jirru eeggachuun barbaachisaadhaa. Waan wayyaaneen nu irratti hojjacttu hundaa dantaa keenyaaf oolfachuun murteessaadhaa ka jennuuf kanaaffi. Ammallee karaa dandeenyuun keessa wayyaanee diiguun barbaachisaadhaa. Amma keessi wayyaanee Hiwaatoota qofatti galeera. Isaanillee yaadaan wal hiraniiruu . kana caalaatti jabeessuuf qabsoo keenya MAARSHII ISAA GEEDDARUUN MURTEESSAAHDAA !!
Maarshii geeddaruun murteedhaa. Diina keenya akka humna xiqqaatti nu ilaaluu kana itti argisiisuun barbaachisaadhaa. Kana jechuun humna dhumaa fayyadamuu akka hin taanee garuu beekuun barbaachisaadhaa. INJIFANNOON KEENYAA JABAADHAA !! dubbii kaan karaa keessaa walitti deebinaa. Galatoomaa .
HORAA BULAA !!!!!
NEWS: PRIME MINISTER AILEMARIAM PUTS ONGOING EXECUTIVE MEETING ON HOLD